FAKANA AN-KERINY : Nisy naka an-keriny teny am-pasana ny zanak’i Danhil | NewsMada
Par Freenews sur 15/05/2017
Tovolahy karana iray antsoina hoe Yanihs Ismaël, zanak’i Danhil tompon’ny orinasa Socolait sy SMTP ary ny La City, no nisy naka an-keriny tetsy Ilafy omaly maraina. Dimy lahy no niaraka naka an-keriny ity tovolahy ity tamin’izany ka ny telo tamin’izy ireo nitondra basy kalachnikov ary ny roa kosa basy poleta.
“Mandeha mamangy fasana eny Ilafy foana ireto fianakaviana ireto isaky ny alahady. Efa misy zandary manaraka foana izy mpiambina azy saingy tamin’ity androany ity (ndlr: omaly) dia nahagaga, tsy fantatra na fifandrifian-javatra na antony hafa, fa izy no nandà tsy nety narahin’ireo zandary ka izao izy nisy naka an-keriny izao”, hoy ny loharanombaovao voaray tamin’ny olona akaiky ny fanadihadiana.
Fiara Mazda X5 mitondra ny laharana 4049 TBC no nentin’ireo jiolahy mpaka an-keriny tamin’izany ka izay no nitondran’ireo olon-dratsy azy ary navelany teo amin’ny fasana kosa ny fiara Porsche Cayenne nentin’io tovolahy io. “Nisy olona hafa niaraka tamin’ity tovolahy ity namangy fasana ary nitondra mpiambina manokana, izay raha ny fantatra dia polisy. Notifirin’ireo olon-dratsy io polisy io tamin’izany”, hoy ihany ny fanampim-panazavana.
Mbola tsy nandrenesam-baovao kosa ny mikasika ity tovolahy ity hatramin’izao fotoana hanoratana izao. Efa mandeha kosa ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana.